Faroole Oo Xilka Ku Wareejiyey Madaxweynaha Cusub Ee Puntland Cabdi Weli Gaas – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe, Mareeg.com: Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa maanta xilka si rasmi ah ugu wareejiyay madaxweynaha cusub ee 8-da bishaan Janaayo ku guuleystay madaxtinimada maamulkaas Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Madaxweynihii hore ayaa sheegay in uu ku wareejiyay Cabdiweli xarunta madaxtooyada iyo mashaariicda horumarinta ah ee ka socda Puntland oo ay ka mid yihiin garoomada diyaaradaha ee Boosaaso iyo Garoowe, dhismaha Jaamacadda Maakhir iyo mashruuca dayactirka waddada dheer ee isku xirta Boosaaso iyo Gaalkacyo.
Xaflad si heer sare ah lo soo agaasimey ayaa subaxnimadda maanta ah ee Talaadada ka dhacdey xarunta Madaxtooyada Puntland ee Garowe ayuu Faroole xilka kula wareejiyey Cabdiweli Cali Gaas.
Xafladda xil wareejinta waxaa ka soo qaybgalay Xildhibaano, Xukuumaddii hore, Isimmo, Culimada diinta, Safiiro ka socda beesha calamka iyo bulshada rayidka ah.
Madaxweynihii hore ee Puntland C/raxmaaan Faroole oo khudbad aad u saraysa ka jeediyey madashii xil wareejinta ayaa sheegay, in ay farxad u tahay maanta in uu xilka ku wareejiyo Madaxweynaha cusub ee la doortey Dr.Cabdiweli Cali Gaas.
“Waxaan ku wareejinayaa xarunta madaxtooyada cusub ee ay ku yaalaan xafiisyadii iyo deegaankiisi, waxaan kale oo ku wareejinayaa Xarunta ciidanka Madaxtooyada oo ku qabsan, maadaama uu yahay Taliyaha u sareeya ee ciidanka Puntland” ayuu yiri Faroole.
Madaxweynihii hore ayaa sheegey in uu sidoo kale ku wareejiyey Madaxweynaha cusub mashaariicdii qabyada ahaa ee dhamstirka u baahan sida labada garoon diyaaradaha ee Bosaso iyo Garoowe, Mashruuca dayactirka waddada laamiga ah ee isku xirta Gaalkacyo iyo Bosaso, iyo dhamaan mashaariicda qabyada ah oo dhan.
“Waxaan ballan qaadayaa in aan la shaqeeyo oo aan waxba ku qabsanayn haba yaraatee, waxaan ku faraxsanahay in dadka reer Puntland waa mideysan yahay, in ay i taageersanaayeen, in aan aqbaley natiijadii iyada oo hal cod noo dhexyasey aniga iyo Madaxweynaha ladoortey” ayuu yiri Faroole.
Ugu danbeyntii madaxweyne Faroole ayaa ku kaftamey kuwii ku faraxsanaa in uu meesha ka tago uu hadda yimid mid isaga la mid ah oo rabbi u doorey, horeyna Soomaaliya Raysalwasaare uga soo noqdey, uuna hubo in uu Puntland meel wanaagsan gaarsiin karo.
Madaxweynanaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ee xilka la wareegey ayaa khudbad kooban ka jeediyey madashii xilka uu kala wareegay Dr. Gaas ayaa ugu horey u mahad celiyey Madaxweynihii hore, oo ku wareejiyey dowladnimo rasmi ah, waxaana uu qirey in Puntland ay maanta leedahay dowladnimo rasmi ah, mahadeedana waxaa iska leh Madaxweyne Faroole.
“Maanta mid ayaan nahay intii anaga noo codeysey, intii Madaxweyne Faroole u codeysey, ha ogaadeen maanta hal mid ayaan nahay, haddii aan mid nahay ayaan meel gaari karnaa, gacmaha aynu is qabsano, diyaar ayaan u ahay wadashaqeyn iyo walaanimo” ayuu yiri Dr. Gaas.
C/weli Gaas ayaa 80dii bishaan Janaayo 1 cod oo kaliya uga badiyey madaxweynihii hore ee maamulka Puntland c/raxmaan Faroole, waxaana xil wareejinta maanta ka sokow la qorsheynayaa in 240ka bishaan Garowe lagu qabto xaflad weyn oo caleemo saar ah.